Kanazawa, miaraka amin'ny hatsaran-tarehin'i Japon medieval | Vaovao momba ny dia
Kanazawa, miaraka amin'ny hatsaran-tarehin'i Japon medieval
Mikarakara diany vaovao any Japon aho, firenena iray izay tiako be dia be. Ny diako fahefatra, noho izany dia mila manaja ny pensilihazo aho ary mahita ireo toerana sy traikefa niainana. Tsy mampino fa mbola tsy niditra an-tongotra mihitsy aho KanazawaNa izany na tsy izany dia nandiso an'ity tanàna mahafinaritra ity foana aho. Fotoana kely, mangatsiaka be, Fiankinan-doha Tokyo...
Fa amin'ity indray mandeha ity aho dia hankany Kanazawa ary tsy izany ihany fa mijanona mandritra ny roa alina aho hiaina izany tsaratsara kokoa. Raha mieritreritra ny hahafantatra an'i Japon ianao dia aza manao ny hadisoako ary maka fotoana kely handehanana any Kanazawa, miaraka amin'ny Japan Rail Pass dia fifampiraharahana ary afaka manao mahavariana ianao fitsangatsanganana antoandro. Raiso tanjona!
2 Ahoana ny fomba handehanana any Kanazawa
3 Inona no ho hita any Kanazawa
Tamin'ny fotoanan'ny feodal, ny fianakaviana mahery indrindra tany Japon dia ny fianakavian'i Tokugawa fa avy hatrany dia ny Fianakaviana Maeda. Ny foiben'ity foko mahery ity dia ny tanànan'i Kanazawa ka noho izany dia azo ampitahaina amin'i Kyoto na Tokyo taloha, Edo.
Ny tsara indrindra amin'izy rehetra ireo baomba mahatsiravina tamin'ny Ady Lehibe Faharoa dia tsy nahomby. Samy nandositra ny fandringanana i Kyoto sy i Kanazawa, ka ankehitriny manana harena sarobidy marobe ianao. Io no renivohitry ny Prefektioran'i Ishikawa ankehitriny ka andao jerena ny fomba hahatongavana any sy izay ho fantatra.
Ahoana ny fomba handehanana any Kanazawa
Miankina amin'ny fiavianao io. Raha any Tokyo ianao ny fomba haingana indrindra dia ny fanaovana azy ao shinkansen, ny lamasinina bala japoney. Bebe kokoa raha manana ny Japan Rail Pass ianao, raha tsy izany dia handany $ 140 amin'ny fomba iray ianao, ary maharitra adiny telo farafahakeliny. Ny mora indrindra dia ny bisy, isan'andro sy isan'alina, miaraka amin'ny taha 45 dolara eo ho eo, saingy adiny fito na valo eo ho eo no ilaina. Mazava ho azy fa afaka mandeha fiaramanidina ihany koa ianao fa ny vidiny dia mihoatra ny 200 dolara.
Raha ny amiko dia ho tonga any Kanazawa avy amin'ny Farihy Kawaguchiko aho ka eny na eny dia mila miverina any Tokyo aho handray ny shinkanen satria tsy misy fiaran-dalamby na bus mivantana eo anelanelan'ny farihy sy Kanazawa. Ary indray mandeha ao an-tanàna ahoana no fomba fivelomanao? Raha tianao ny mandeha an-tongotra dia akaiky ny zava-drehetra. Raha tsy azonao ny Bus Kanzawa Loop mampifandray ny gara lehibe misy manintona maro.
Este bus fitaterana mandalo isaky ny 15 minitra amin'ny lafiny roa ary mora be io, manodidina ny roa dolara tsy misy hafa. Misy bisy mpizahatany hafa koa izay Kenrokuen Shuttle Miala amin'ny gara izy isaky ny 20 minitra ary mitentina dolara isaky ny dia ary roa amin'ny faran'ny herinandro na fialantsasatra. Mampifandray ny gara miaraka amin'ny Kenrouken Garden, ilay tsara tarehy indrindra eran'i Japon. Azonao atao ny manararaotra sy mividy ny pass de bus 24 ora ahafahana mampiasa bisy sy fanomezana fihenam-bidy amin'ny tranokala sasany.
Misy Bisy JR koa aiza no ahafahanao mampiasa ny JRP ary miainga avy eo amin'ny gara mankany amin'ny valan-javaboary. Miasa intelo isan'ora izy io ary 12 minitra fotsiny ny dia. Raha tsy misy ny JRP dia $ 2 ny vidiny. Raha ao ianao Kyoto afaka mampiasa lamasinina voafetra voafetra ianao, JR. Maharitra adiny roa ny dia ary na dia $ 63 eo aza ny vidiny dia rakotry ny JRP. Afaka mandeha lamasinina eo an-toerana ihany koa ianao fa maharitra adiny efatra na adiny dimy satria mila miova ianao. Safidy iray hafa ny bus izay mitentina eo anelanelan'ny $ 35 sy $ 40 ary maharitra adiny efatra. Ny elanelana misy Osaka ary i Kanazawa dia mitovy ihany.
Inona no ho hita any Kanazawa
Niresaka tetsy ambony momba ny Kenrokuen Garden toy ny iray amin'ireo zaridaina tsara tarehy indrindra any Japon, fa ny tsara indrindra ho an'ny manam-pahaizana manokana. Izy io dia ny zaridaina ivelany an'ny Kanazawa Castle ary natsangana tamin'ny fotoanan'ny fianakavian'ny Maeda. Nisokatra ho an'ny besinimaro tamin'ny 1871 fotsiny izy io ary feno voninkazo sy hazo tsara tarehy. Ny vanim-potoana tsirairay dia toy ny mahita zaridaina hafa.
Ao anatiny dia misy tranombakoka asa-tanana, tsangambato, fanilo vato, loharano, riandrano, trano dite ... Ity zaridainam-panjakana ity dia eo amin'ny zotram-pizahàn'ny mpizahatany ary manokatra eo anelanelan'ny 7 maraina sy 6 hariva. Ny fidirana dia telo dolara mahery monja. Etsy ankilany dia nilaza izahay fa Kanazawa dia tanàna tafavoaka tamin'ny baomba niray dina ka maro ny tranobe tranainy ary maro amin'izy ireo no mifantoka amin'ilay antsoina hoe Distrikan'i Higashi Chaya, ilay misy trano dite sy geisy.
Ny tanàna dia manana ny telo amin'ireo distrika ao chayas na trano dite tantanan'ny geisy: an'i Higashi, Nishi ary Kazuemachi. Amin'izy ireo, ny an'i Higashi no lehibe sy tsara tarehy indrindra. Misy trano dite roa misokatra ho an'ny besinimaro eto, ny Kaikaro sy ny Shima, ary ny fivarotana sy kafe maro. Manokatra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 5 hariva i Chaya Kaikaro ary mitentina $ 7 ary mikatona adiny iray i Shina ary 5 $ ny vidiny. Higashi dia tratran'ny bus bus loop ao anatin'ny 10 minitra avy eo amin'ny gara.
Japon sy ny ninjas. Tantara inona izany! Ary ny Maeda Clan dia nanana ny azy ireo, mazava ho azy, ka raha tianao ny ninja sy samurais dia tsy maintsy mitsidika ny Tempolin'i Myoryuji, fantatra koa amin'ny hoe tempoly ninja. Fa maninona Eny, satria manana trano fiarovan-tena miafina maro izy io. Io ilay shogun, tompon'ny feodaly matanjaka indrindra amin'ny andriana feodaly rehetra tany Japon tamin'ny taon-jato, nametraka lalàna fananganana sasany mba hampalemy ny fahavalony. Noho izany, ny Maeda, dia nanangana tranobe manaraka ireo fitsipika ireo fa hafa kosa ny ao anatiny.
Izany hoe, manana ity tempoly ity làlana miafina, làlan'ny fandosirana, lalantsara labyrintinina, fiarovana. Mihoatra ny tempoly iray, tranobe miaramila nafenina niaro ny tranon'ny fianakaviana izy io. Androany ianao dia afaka mahafantatra ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana izay na dia amin'ny teny Japoney aza dia manolotra bokikely amin'ny teny Anglisy- Tonga eo amin'ny bus fitaterana ianao miala eo amin'ny fijanonana Hirokoji. Manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4:30 hariva ary 10 $ ny vidiny.
Manohy ny lohahevitra samurai ananantsika Nagamachi na distrikan'ny samurai izay eo am-pototry ny lapa. Io no nonenan'ny samurais sy ny fianakavian'izy ireo ary ny arabe sy ny tranony dia nitahiry izany hatsarana taloha izany. Trano, zaridaina manokana, lakandrano, lalan-kely. Manokana, tsy azonao atao ny tsy mahita ny trano samurai tafaverina amin'ny laoniny antsoina hoe Nomurake sy ny fivarotam-panafody taloha, ny Shinise Kinenkan, tranombakoka ankehitriny. Ny fidirana amin'ny trano samurai dia mitentina 5 dolara ary ny an'ny tranombakoka dia mora kokoa, 1 dolara fotsiny.
Farany dia misy ny Castle an'i Kanazawa, noravana sy namboarina imbetsaka, na dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX aza. Maimaimpoana ny fidirana. Marina fa angamba iray andro dia ampy hahafantarana an'i Kanazawa fa raha tsy tianao ny fizahantany milaza hevitra dia tsara ny mijanona iray na roa alina, raha tianao ny fitsangatsanganana manodidina. Ny iray amin'izy ireo dia ny fitsangatsangana amin'ny faritra be tendrombohitra Shirakawago sy Gokayama, Lova Iraisam-pirenena.
Misy tanàna vitsivitsy izay misy trano tafo bozaka mahazatra, miaraka amin'ny tafontrano toy ny tanan'ny Buddha mivavaka. Fomba iray manokana izay na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina, rehefa latsaka ny lanezy ka manarona azy ireo, dia manaitra. Tsy manana fantsika iray akory izy ireo ary ny savoka maniry ao an-tampon-trano. Amin'ireo vohitra rehetra izay andrasana indrindra hitsidika azy dia ny Ogimachi.
Eto ianao dia afaka mahita ireo trano ao amin'ny tranombakoka malalaka izay mitentina 6 dolara ny fidirany. Ho an'ny karatra paositry ny tanàna dia tsy maintsy miakatra amin'ny Fijery Shiroyama, 20 minitra eo ho eo avy eo afovoan-tanàna. Tonga any Ogimachi amin'ny bus ianao avy any Kanazawa. Raha jerena amin'ny ankapobeny izany rehetra izany dia manana karatra paositra mahafinaritra avy any Kanazawa ianao. Fantatrao, raha mankaleo ny trano fanaovana tranokala any Tokyo ianao, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » mpitarika » Kanazawa, miaraka amin'ny hatsaran-tarehin'i Japon medieval
Ny jiro fifamoivoizana dia hifehy ny fidirana amin'ny kianjan'i St. Marka manomboka amin'ny taona 2018